Home Somali News Somaliland: Saylici oo xadhigga ka jaray Shirkadda Gadiidka ee Sahal Transport and...
Madaxweyne-ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaciil “Saylici” Somaliland ayaa maanta xadhiga ka jaray Shirkadda Sahal Transport and Logistics xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ku qabsoontay Green Plaza,Hargeisa.
Waxa sidoo kale munaasibadda ka soo qayb-galay Wasiirrada Ganacsiga Dr. Muuse Qaasim, Hawlaha Guud Cabdirisaaq Khaliif, Wasiir-ku-Xigeenka Qorshaynta Qaranka Cabdikariim Axmed Mooge, Wasiir-Ku-Xigeenka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Cabdiwaaxid Cabdiraxmaan, xildhibaano iyo masuuliyiin kale.
Shirkadda ayaa soo bandhigtay gaadiid aad casri u ah kana duwan kuwii hore ugu kala gooshi jiray gobollada. Wejiga koowaad waxay u kala gooshayaan Hargeysa, Boorama, Gabiley iyo Wajaale.
Sida uu tibaaxay Mukhtaar Cali-Faraans oo ah masuul sare oo ka socday shirkadda Sahal shirkaddani shirkaddani ay faa’iido wax-ku-ool ah ku soo kordhin doontaa isku socodkii dadka iyo alaabaha ee gobollada galbeedka.
[quote]“Shirkaddu waxay ku dedaashay sidii ay dalka ugu soo kordhin lahayd gaadiid cusub oo wax-ku-ool ah, casri ah, rakaabkuna amni ahaan isku hallayn karaan raaxona dareemi karaan inta ay saaran yihiin” ayuu yidhi Mukhtaar.[/quote]
Sahal Transport and Logistics